4. अनिच्छा र डर भएमा के गर्ने ? - Investigative Journalism Manual
स्रोतले तपाईंका प्रश्नको जवाफ नदिनका लागि उसँग धेरै कारण हुन्छन् । माथि हामीले ढाकछोप गर्ने मानिससँग कस्तो व्यवहार गर्ने ’boutमा छलफल ग¥यौं तर मानिसले पत्रकारसँग कुरा गर्न डराउनुका पछाडि वास्तविक र जायज कारण हुन्छन् । तपाईंले कुराकानी गर्न खोजेको मान्छेले आघात भोगेको हुनसक्छ अथवा आफ्ना कुरा बताउँदा आफूलाई समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने डर उसलाई हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्वार्ता दिन सामान्य बल गर्दा ठीकै हुन्छ । यतिवेला कुराकानी गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो— उसले चिनेजानेका मान्छेलाई भनेर तपाईंसँग कुराकानी गर्न उसलाई मनाउनु ।
विभिन्न कारणले गर्दा मानिसले ढाँट्न सक्छन् अथवा अर्धसत्य बोल्न सक्छन् । यसो गर्नुमा सधैंभरि गलत मनसाय हुन्छ भन्ने छैन । अस्वीकार गर्नु एक किसिमको मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जतिवेला मानिस आफ्ना ’boutका केही कुरा लुकाउँछन् ’cause यिनको सामना गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणका लागि, बलात्कृत मानिस अथवा अरू बलात्कृत भएको घटना देखेका मानिसले यो कुरा तपाईंलाई नबताउन सक्छन् ।
आफूले तयार गर्न लागेको स्टोरी बनाउनका लागि सही प्रश्न सोध्नुपर्छ । खोजमूलक स्टोरीका लागि जानकारी संकलन महत्वपूर्ण पाटो हो । खोज पत्रकारितामा स्टोरी लेखन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्काे खण्डमा हामी आफूले संकलन गरेका जानकारीका आधारमा राम्रो स्टोरी कसरी लेख्ने भन्ने ’boutमा छलफल गर्छाैं ।